Ny tsy ilaina - Part 19 | Apg29
Ny tsy ilaina - Part 19
Ao 'ity faritry holazaiko aminao ny tena fahoriana hetsika, izay nitranga tamin'i Michael araka izay niditra teo an-miady amin'ny tapany farany.
Michael dia niavaka mpianatra ao amin'ny sekoly. Tsy fantatro mihitsy izy. Tsy fantatro ny mombamomba na iza marina moa izy, mihoatra noho izany, dia hahatakatra fa ny mpampianatra dia heverina ho sarotra ny mahafantatra ny korontana sy ny mpianatra.
Taorian'ny fotoam-pianarana ny mpampianatra nibedy azy, ka nitondra ahy ho fiarovana ny marina. Fotoana iray taorian'ny zava-nitranga izany, dia mpianatra iray hafa no mampijaly ahy. Dia nitondra ahy ho fiarovana, ary nanosika io olona io amin'ny lohaliny raha nipetraka teo amin'ny dabilio niaraka tamin'ny olon-kafa vitsivitsy ao amin'ilay lalantsara ivelan'ny efitrano fianarana mandritra ny fiatoana. Tsy dia tsara anefa izany, fa efa mitsangana eo amin'ny lafiny Gaga sy mijery fotsiny. Tsy hitako izay tokony holazaina momba izany toe-javatra. Tadidiko fa hoy izy: tsy tokony hananihany Chris, fa tokony ho tsara fanahy aminy, ary avy eo izy efa nanao ny roa lohaliny ny indray vao nanosika azy teo amin'ny dabilio ny lanjany.
Michael angamba ao am-pony ny olona iray tena tsara fanahy, ary nanana fo tsara, fa tena tena toy sy tsy hoatr'izany. Dia nandeha ho any amin'ny sekoly ihany toy ny fiara fitateram-bahoaka aho. Nanitsaka ny olona iray izy Mil aloha noho izay azoko teo amin'ny toeram-pambolena any Skeen mba handeha any amin'ny roa kilaometatra Ljungby.
Indray tolakandro rehefa nandeha an-trano ny lehibe i Michael SJ fiara fitateram-bahoaka sy ny namana ny tena tsy hoatr'izany. Romped izy ireo, ary niantsoantso ka nihazakazaka swarmed sy miverina ary lasa fantsona ny lalantsara 'ny fiara fitateram-bahoaka, raha ny hafa rehetra nipetraka moramora ireo mpianatra ao an-toerana, ka sahy hilaza na inona na inona. Ireo tanora roa efa toy izany naka ambonin'ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny finoana fa "naka ny fiara fitateram-bahoaka", ary afaka manao araka ny sitrapony. Ny roa kilaometatra manontolo aho ny fiara fitateram-bahoaka niaraka alohan'ny azoko intsony eo amin'ny fijanonana, izy ireo raha mbola nanohy ny fiara fitateram-bahoaka ny faharetana mpamily nihazakazaka nivoaka bebe kokoa amin 'ny minitra, ary tsy ela dia nahatratra ny fetra.
Ny andro manaraka, Michael nilaza tamiko ny fahatokiana ho ahy, rehefa nipetraka teo amin'ny dabilio ihany izy, dia efa nanery ny lehilahy, izay efa nanjo teo amin'ny fiara fitateram-bahoaka rehefa azoko eny. Ny fiara fitateram-bahoaka amim-paharetana mpamily izay nandroahako ny fiara fitateram-bahoaka tamin'ny farany ho tezitra ka dia nihorohoro-katezerana sy natsipy amin'ny Michael sy ny namana any ho any an-dalana alohan'ny efa nahatratra ny fijanonana.
Hoy aho hoe na inona na inona momba izany, fa toa fantatro fa ny fiara fitateram-bahoaka tsy nanan-tsafidy mpamily fa ny hanao izay nataony. Tokony ho fantatrao fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana hevitra. Tsy Boo na baa, nihaino fotsiny aho ary niezaka haka ny zavatra toy ny tsara indrindra vitako aho. Dia tsy ho mpandalina, dia tsy fantany izay dia ho nefa amin'ny fomba rehetra izay nitsangana teo aho ary nanara-morona nijery fotsiny. Dia tsy ny tantara ny mpilalao fototra, fa mangina tsotra sy saro-kenatra sy tsy matoky tena mpanara-maso kely, izay tsy sahy hisakana.
Inona no tena zava-nitranga taorian'izay ny lava skranglige stökige zazalahy izay nampijaly ahy ary Nivazavaza amin'ny alalan'ny mpampianatra ahy, Tsy fantatro raha ny amin'ny tsipiriany. Inona anefa no nitranga dia mampalahelo mafy sy mahery setra. Mety hanafintohina ny sekoly rehetra, ary ny mpianatra dia hahatsapa ratsy sy ny gazety fa hanoratra momba izany. Indrindra, fantatro fa misy mpiara-mianatra avy amin'ny Ahy nilaza fa nanana ache kibony ny zava-nitranga.
Michael sy ny namana ny atao hoe Patrick dia nivoaka mandeha indray hariva tao an-tanàna izay nitoerany. Izy ireo hiatrika roa na telo hafa ny tanora sady tao avy tamin'ny takariva niavaka io. Ny iray tamin'izy ireo nanana rojo vy niaraka taminy araka izay teo aloha tao amin'ny hariva ny andro nangalatra avy amin'ny raharaham-barotra. Io no rojo izay nakatona ny vola any amin'ny faran'ny ny fifanarahana.
Rehefa nanafika ireo tanora sy ny mpiara-mitory Michael. Michael voadaroka-kerisetra sy tamin-kerisetra tao an-rojo. Patrick namany nandositra vozony eo amin'ny lohany. Tafavoaka velona izy, afa-tsy Mikaela niady mpandatsa-drà ho faty amin'ny herisetra daroka ny rojo.
Ny fihaonany tamin'ny Michael nanomboka tsy dia tsara, dia namely ny nosebleed azy, araka ny nolazaiko taminareo ao amin'ny tapany farany. Lasa mpinamana anefa izahay ary nanana fanajana ny tsirairay, eny, na dia niaro ahy eo anoloan'ny olon-kafa rehefa mampijaly ahy. Mino aho fa Michael nanana fo tsara, na dia teo aza ny zava-misy fa ny fiara fitateram-bahoaka efa lasa mpamily tezitra dia nihorohoro toy ny Noroahiny Michael sy ny namany.
Raha ny marina aho nahazo namana fotoana fohy talohan'ny tamin'ny fomba feno herisetra ity, nesorina avy amin'izao tontolo izao.
Ny sainam-pirenena dia hoisted sekoly antsasaky ny andry tokana.
Mizara hatramin'izao rehetra ao amin'ny tsy niriana
Ity serial no tantaram-piainany manomboka amin'ny fahazazany. Tsy nanan-kitafy, ary lazaiko mazava ao. Maro Mbola tsy nilaza taminareo ny momba aloha. Anarana sasany ao amin'ny tantara dia noforonina.